१०० मा फोन : धम्की, ब्लफ कल, झुठो सूचना र वरदान
राजेश भण्डारी २३ कार्तिक शनिबार, २०७६	१२:५४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सधैं जस्तै एक रात महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीको फोनको घन्टी बज्यो । मध्यरात भए पनि फोन उठाउनै पर्‍यो । उनले फोन उठाए ।
फोन गर्नेले भने– ‘बालाजुको डीएसपीले मलाई दुर्व्यवहार गरे, तत्काल कारवाही गर्नुस् !’
आफ्ना डीएसपीले दुर्व्यवहार गरेको थापालाई खासै पत्यार लागेन । उनले भने–‘ बिहान बुझ्छु, दुर्व्यवहार गरेको भेटिए कारवाही गर्छु ।’
फोन गर्नेले भने– ‘भोलीसम्म किन कुर्ने ? म वकिल हूँ । तपाईं पनि मलाई दुर्व्यवहार गर्ने ? तपाईले बोलेको कुरा रेकर्ड गरेको छु !’
मातेको सुरमा कसैले फोन गरेको शैलेशले बुझिहाले । मातेका मानिस हुन् या नमातेका, अनावश्यक फोन कलले ‘१०० नम्बर’ वाक्कदिक्क भएको छ । शैलेस भन्छन्– ‘यस्ता फोनले हामी हैरान भएका थियौं । हामीले विशेष प्रयास गरेर ब्लफ कलको संख्या घटाएका छौं ।’
गत चैतमा १०० मा करिब साढे तीन सय ब्लफ कल आएको थियो । ‘एउटा मात्र ब्लफ कल या गलत सूचनाले प्रहरीको पूरै एउटा टिम घन्टौंसम्म अल्मलिन्छ । प्रहरीको समय मूल्यवान हुन्छ भन्ने अब समाजले बिस्तारै बुझ्दैछ’– शैलेस भन्छन् ।
१०० मा यस्ता खालका फोन पनि आउँछ –
– घटना बढाई–चढाई गरेर अर्थात् तिललाई पहाड बनाएर सर्वसाधारणले सूचना दिन्छन्
– भनाभन परेको छ भने कुटाकुट भयो भन्दै र कुटाकुट भयो भने मानिस मारियो भन्दै कल गर्छन्
– रक्सीले मातेर अनावश्यक फोन गर्ने
– सम्पूर्ण रुपमा झुठा सूचना दिने
– प्रहरीलाई धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने
– मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएर फोन गर्ने
– पतिपत्नी झगडा गरेर फोन गर्ने
पुरुष प्रहरीको पीडा
काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंको सुरक्षा ब्यवस्थाको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीको कन्ट्रोल रुमले एकसाथ १८ वटा फोन कल रिसिभ गर्न सक्छ । तर, १८ वटा भन्दा धेरै कल एकसाथ आएमा १०० नम्बर विजी हुन्छ ।
१०० नम्बरको अर्काे व्यथा हो– कल गरेर नबोल्ने । गत असोजमा त्यस्तो कल करिब चार हजार आएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । हरेक महिना तीन हजारभन्दा धेरै कल बोल्दै नबोल्नेको हुने गरेको छ ।
कतिपयले चाहिँ कल गर्छन् र फोन काट्छन् । अर्थात्, मिस्ड कल गर्छन् । मासिक दुई हजार हाराहारीमा मिस्ड कल आउने गरेको छ ।
शैलेस भन्छन– ‘ब्लफ कल, मिस्ड कल र बोल्दै नबोल्ने कलका कारण कन्ट्रोल रुमको फोन ब्यस्त हुने गर्छ ।’
महिलाले जिस्काउन कल गर्छन्
१०० नम्बरको सबैभन्दा अनौठो समस्या पुरुष जिस्काउने महिला हुन् । नेपाली समाजमा सामान्यतया पुरुषले महिलालाई जिस्काउँछन् तर १०० मा कल गरेर चाहिँ महिलाले पुरुषलाई जिस्काउँछन् ।
‘पुरुष अपरेटरले फोन रिसिभ गर्दा महिलाले जिस्काउँछन’– कन्ट्रोल रुमका प्रहरी नायव निरिक्षक (सई) प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने –‘महिला प्रहरीले फोन उठाए भने चाहिँ नबोली बस्छन् ।’
महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पुरुष प्रहरीलाई जिस्काउन बारम्बार कल गर्ने महिलाका लागि ‘विशेष व्यवस्था’ गरेको छ । त्यस्ता महिलालाई कलब्याक गरेर सम्झाईबुझाई गरिन्छ । यो काम गर्छिन् इन्स्पेक्टर प्रसिद्धिका कँडेल । उनले धेरै महिलालाई कलब्याक गरेर सम्झाई बुझाई गर्ने गरेकी छिन् ।
तैपनि १०० नम्बरमा कल गरेर पुरुष प्रहरी जिस्काउने महिलाको संख्या घटेको छैन ।
यस्तो हुन्छ गुनासो
प्रहरी कन्ट्रोल रुमले अनौठा अनौठा कलको सामना गर्नुपर्छ । केही नमूना–
– हाम्रो घर अगाडि सडकमा खाल्डो परेको छ, प्रहरी के हेरेर बसेको छ ? टाल्नुपर्दैन ?
– हाम्रो घरमा सर्प पस्यो, चाँडो पुलिस पठाइदिनुपर्‍यो ।
– म आत्महत्या गर्न लाग्दैछु, के गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुस् ।
साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म सबैभन्दा धेरै फोन आउने गरेको छ । बाढी, पहिरो र हावाहुरी चल्दा धेरै कल आउँछ ।
सर्वसाधारणले १०० मा फोन गरेर सूचना दिएपछि सो ठाउँमा प्रहरी अवश्य पुग्ने गरेको छ । तर, कतिपय घटनाको सूचना सर्वसाधारणले बढाईं–चढाई गरेर दिएका हुन्छन् । आत्महत्या गर्छु भन्दै कल गर्ने धेरैलाई प्रहरीले बचाएको पनि छ ।
डिआईजी क्षेत्री भन्छन्– ‘घटना सामान्य भनाभनको हुन्छ तर खुकुरी तरबार लिएर आए भनेर हामीलाई कल गर्छन्, प्रहरी पुग्दा केही हुँदैन ।’
टेलिकमका कुनै फोन नम्बर थाहा पाउन परे नेपाल टेलिकमको १९७ मा कल गर्ने हो, तर धेरै सर्वसाधारणले १०० मा गर्छन् ।
घटनास्थलमा प्रहरी समयमै नपुगेको गुनासो पनि १०० मा धेरै आउने गरेको छ । उपत्यकाका मुख्य शहरी क्षेत्रमा चार देखि १० मिनेटमा प्रहरी पुग्ने गरेको छ । सहर बाहिर त्यति समयमा नपुग्न पनि सक्छ, त्यस्तो बेला गुनासाको फोन एकसाथ धेरैवटा आउँछ ।
ब्लफ कल गर्नेलाई मुद्दा
मनपरी कल गर्ने सबैले प्रसिद्धिका कँडेलको सम्झाई बुझाई पाउँदैनन् । अति गर्नेले पक्राउ परेर मुद्दा नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
ठमेलको एक होटलमा सिन्धुली कमलामाईका राजु लामा र घनकुटाकी सरिता बस्नेत बसेका थिए । ती दुईले रक्सीले मातेर लगातार फोन गरेर प्रहरीलाई गाली गरेका थिए । ४० पटकभन्दा धेरै फोन गरेपछि उनीहरु होटलबाटै पक्राउ परे । गत १५ माघको घटना हो यो । उनीहरुलेसार्वजनिक हित तथा नैतिकता विरुद्धको कसुरमा मुद्ध भोग्नुपर्‍यो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवाली भन्छन– ‘कन्ट्रोलमा फोन गरेर हैरानी दिनेहरुलाई हामीले मुद्दा चलाउने गरेका छौं ।’
सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे घर भई गोकर्णेश्वर बस्ने ३१ बर्षिय लिलाबहादुर तामाङले पनि राजु र सरिताले जस्तै मुद्दा भोगे । १०० नम्बरमा फोन गरेर प्रहरीलाई झुठो सूचना दिएर झुक्याएको कसूरमा उनलाई २७ भदौमा पक्राउ गरियो अहिले उनी विरुद्ध मुद्दा चलिरहेछ ।
‘लिलाबहादुरले फोन गरेर धेरै पटक झुठो सूचना दिएर प्रहरीको श्रम र समय बर्बाद गरिदिए’– महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धका डीएसपी रमेश बहादुर सिंह भन्छन– ‘उनको फोनको आधारमा घटनास्थल पुग्दा केही भएको हुँदैन थियो ।’
नयाँ फौजदारी संहिताले ब्लफ कल गर्नेलाई एक बर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ । फौजदारी अपराध संहिताको धारा–२९९ अनुसार कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले टेलिफोन गर्नु हुँदैन ।
१०० मा ‘महरा कल’
प्रहरीको १०० नम्बर विरलै अदालतमा प्रमाण बन्छ । तर, रोशनी शाहीले ‘मलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयास गरे’ भन्दै गरेको फोन उजुरी भने प्रमाणका रुपमा अदालतमा पेस भएको छ ।
प्रहरीमा रोशनीको त्यो फोन कल ‘महरा कल’का नामले चर्चित छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयले कन्ट्रोलमा आउने हरेक कल रेडर्क हुन्छ । कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै रोशनी शाहीले गरेको फोन पनि रेकर्ड भएको थियो । त्यो फोन रेकर्ड प्रमाणका रुपमा प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको छ ।
१०० नम्बरमा आएका कल सम्बन्धित एरियामा रहेको सीआरभी (कन्ट्रोल रुम भेहिकल कमाण्डर) लाई ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम प्रयोग भएको एक बर्ष भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ७१ वटा सीआरभीका कमाण्डरले बोक्ने फोनमा ट्रान्सफर गरिन्छ । सो कल सम्बन्धित क्षेत्रको वृत्त अथवा प्रभागमा रहेका ड्युटी अफिसरलाई समेत ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ ।
नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ‘कल ट्रान्सफर सिस्टम’ लागु गरिएको डीआईजी क्षेत्रीले बताए ।
१०० नम्बरमा एसएमएस गर्न पनि सकिन्छ । तर, आजकाल सर्वसाधारणले एसएमएस प्रयोग गर्न छाडेका छन् । त्यसैले थोरै मात्र एसएमएस आउने गरेको छ ।
१०० मा आउने एक खालको अनावश्यक कलका अगाडि चाहिँ प्रहरी नै लाचार हुन्छ, केही गर्न सक्दैन । त्यस्तो कल गर्छन् बालबालिकाले ।
प्रहरीले स्कुले बालवालिकालाई १०० नम्बर सञ्चालन हुने कन्ट्रोल रुम भ्रमण गराउने गरेको छ । ‘प्रहरीसँग एक दिन’ कार्यक्रम सुरु गरेर एक बर्षयता ११४ पटक बालवालिकालाई प्रहरी कन्ट्रोल रुम सहित उपत्यकाको विभिन्न युनिट भ्रमण गराइएको छ ।
शैलेस थापा भन्छन्– ‘१०० नम्बरमा हामीले धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । तर, जति समस्या भोग्नुपरे पनि यो नम्बर प्रहरी र आम जनता सबैका लागि वरदान भएको छ ।’